Faayilii - Haaraa - Waammee - Waammee caancalaa
Barruu asxaa(wwan)irratti mul'isuu barbaaddee galchii ykn saagi.
Barruu asxaa irratti mul'isuu,barbaadde galchi.Dabalataanis dirree kuusaa deetaa saagi.
Teessoo deebii kee waliin asxaa uuma. Barruun kan ammeetti sanduuqa Barruu asxaabarreeffameera.
Kuusaa deetaa akka madda deetaatti asxaa keetiif fayyadammtu fili.
Gabatee kuusaa deetaa dirree(wwan)qabatee kan asxaa kee keessatti fayyadamuu barbaadde fili.
Dirree kuusaa deetaa
Maqaan diiree kuusaa deetaa sanduuqa Asxaa barruu keessatti sadallaadhaan marfameera. You barbaadde,dirreewwan kuusaa deetaa iddoodhaan qooduu ni dandeessa airree kuusaa deetaa sajarg haaraa irratti saaguuf Gaichuu Dhiibi.
Asxaawwan waraqaa fufaa irratti maxxansa.
Asxaawwan wardiiwwan dhuunfaa irratti maxxansa.
Sumuda waraqaa fayyadamuu barbaadde fili. Tokkoon tokkon sumudaa hammamtaa dhangiiwwan ofiiisaa qaba.
Hammamtaa dhangii fayyadamuu barbaaddee fili. Dhangiwwan jireessaa sumuda tarree Sumuda keessatti filatte irratti hundaa'a. Asxaa maammiloo fayyadamuu yoo barbaadde, [Fayyadamaa] fila, ittaansuu dhaan Caancala Dhangii cuqaasi dhangii qindeessuu dhaaf.
Akaakuu waraqaa fi bal'inni asxaa jala bal'ina Dhangiitti agarsiifama.
Title is: Asxaawwan